Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Muqdisho goobo la qabsadey & warar kale + Sawiro – SBC
Wararkii ugu dambeeyey dagaalada Muqdisho goobo la qabsadey & warar kale + Sawiro
Guluf weerar oo xoogan oo ay saaka qaadeen ciidamada DFKMG ah oo kaashanaya kuwa AMISOM ayey u suurtagshay ciidamada isbahaysanaya inay ku qabsadaan fariisimo cusub oo hor leh oo ay kala wareegen xoogaga xarakada Al-Shabaab, iyadoo goobahaasi ay ku yaalaan qaybo ka mid ah Waqooyiga Magaalada Muqdisho.
Goobaha Shabaabka lagala wareegay
Fariisimada & goobaha muhiimka ah ee ay la wareegeen ciidamada DFKMG ah ayaa waxay ka tirsan yihiin degmooyinka Boondheere, Wardhiigley & Shibis, waxaana ka mid ah Xaruntii ama dhismihii hore ee wasaarada arimaha gudaha, xarunta degmada Boondheere, Suuqa Maanaboolyo, Isgoyska Siinaay, iyadoo dirir qaraar oo dhimasho iyo dhaawac sababtey ay keentey in goobaha laga faramaroojiyop xoogaga Shabaabka.
Ciidamada Dawlada KMG oo calanka dalka ka taagaya goob ay qabsadeen
Dagaalka maanta ka dhacay degmooyinkaasi ayaa ahaa kii ugu xooganaa iyadoo ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi & Ugandha ay dagaalka u adeegsadeen baabuurta gaashaan sida dabaabaadka dagaalka, & cagaf cagafto ay ku doonayeen inay ku aasaan bohol & godod waa weyn oo ay goobahaasi ka qodeen xoogaga Shabaab, kuwaasi oo dhufeys u ahaa.
Wariyaha SBC International ee furimaha dagaalka saaka tagey Axmed Aar ayaa soo sheegaya in ugu yaraan 12 Taangiyada dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ay dagaalka ka qayb qaateen, kuwaasi oo madaafiic xoogan ku garaacayey fariisimada ay ku sugnaayeen xoogaga Shabaab iyo waliba xaafado ka durugsan goobaha lagu dagaalamayo.
Khasaaraha dagaalkan uu dhaliyey ee dhimashada, dhaawaca & burburka hantida ummada u dhaxeysa iyo mida gaarka loo leeyahay ayaa ah mid aad u fara badan, iyadoo ilaa iyo hada SBC loo xaqiijiyey dhimashada ugu yaraan 12 qof & dhaawaca 20 kale oo wax ku noqdey madaafiic si toos loogu garaacay xaafadaha Suuqa Xoolaha & Huriwaa oo aad uga fog goobaha lagu dagaalamayo.
Madaafiicdan oo sida la aaminsan yahay ay rideen ciidamada AMISOM waxay u muuqanaysaa in lagu bartilmaameysanayo goobaha ay sida aadka ah ugu xoogan yihiin ama ay ku leeyihiin saldhigyada xoogaga Shabaabka.
Hase yeeshee dadka deegaanka Suuqa Xoolaha oo ay SBC xiriir la sameysay ayaa inoo xaqiijiyey in duqeyntaasi ugu yaraan 10 qof oo rayid ah inay ku dhinteen kuwaasi oo ay ku habsadeen madaafiic si aan loo meel dayin deegaankaasi loogu garaacay.
Dhinaca kale xiriiro kala duwan oo aynu la sameynay Isbitaalada Muqdisho ayaa naloo sheegay in ugu yaraan 30 qof oo qaba dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyey Isbitaalada, kuwaasi oo ku dhaawacmey dirirta ka aloosan qaybo ka mid ah waqooyiga Muqdisho
Dhaawacyada la keenay Isbitaalada waxaa ka mid ah kuwa xaaladoodu aad u liidato iyadoo afar qof ay uy dhinteen dhaawacyadii soo gaarey.
Dhinaca kale goobaha ay saaka ka dhaceen dagaalada waxaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhinacyadii dagaalka ku lugta lahaa.
Sheegashada guulaha dagaalka ee dhinacyada diririaya.
Inkastoo saxaafadu aragtey goobo laga qabsdey xoogaag Shabaabka, hadana masuuliyiin ka tirsan dhaqdhaqaaqi ayaa u sheegay saxaafada inay jab aad u culus u geysteen wax ay ugu yeereen shisheeyaha soo duuley.
Afhayeenka xarakada Al-Shabaab Sheekh Cabdicasiis Abuu Muscab oo ay soo xigatey idaacad ku hadasha codka xarakada Al-Shabaab ayuu ku sheegtey inay dib u waabiyeen oo ay jabiyeen ciidamada Burundi & kuwa Ugandha oo duulan ku soo qaadey sida uu sheegay fariisimo ay ku sugnaayeen xoogagooda.
Afhayeenku waxaa kale oo uu sheegay in ay xoogaga Shabaabku gubeen sadex ka mid ah taangiyada ciidamada AMISOM, inkastoo aan la heyn cadeymo rasmi ah oo arinkaasi xaqiijinaya.
Dhinaca kale masuuliyiin ka tirsan dawlada KMG ah ayaa sheegay inay jabiyeen oo ay ka qabsadeen goobo fara badan wax ay ugu yeereen khawaarijta Shabaabka, iyagoo sheegtey inay ka qabsadeen deegaano ka tirsan Boondheere, Wardhiigley & Shibis, waxaana ay sheegeen in dagaaladu haatan ka socdaan inta u dhaxeysa Afarta Jardiino & Sanca.
Si kastaba ha ahaatee dagaalkan maanta ka dhacay magaalada Muqdishu wuxuu ku soo aadayaa iyadoo ciidamada AMISOM & kuwa dawlada FKMG ah ay guulo la taaban karo ka gaarayeen dirirta colaadeed ee ka aloosna magaalada Muqdisho, kuwaasi oo ay isaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab oo doonaysa inay afgambiso xukuumada uu horseedka ka yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Sawirada 2 ka mid ah waxaan ka soo qaadanay radio Muqdisho
Axmed Aar & Keyse Caamir